Esdras 2 BDS - Ɛsra 2 AKCB
1Eyinom ne Yudafo nnommum a wɔwɔ amantam no mu a wofi asutwa mu baa Yerusalem ne Yuda nkurow bi so no. Ɔhene Nebukadnessar na otwaa wɔn asu kɔɔ Babilonia. 2Na wɔn ntuanofo yɛ Serubabel, Yesua, Nehemia,2.2 Saa Nehemia yi nyɛ Nehemia a ɔkyerɛw Nehemia Nhoma no. Seraia, Reelaia, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum ne Baana.
Israel mmarima a wofi asutwa mu bae no dodow ni:
3Dodow a wɔyɛ Paros asefo 2,1724Sefatia asefo 3725Arah asefo 7756Pahat-Moab asefo (Yesua ne Yoab asefo) 2,8127Elam asefo 1,2548Satu asefo 9459Sakai asefo dodow yɛ 76010Bani asefo dodow yɛ 64211Bebai asefo dodow yɛ 62312Asgad asefo dodow yɛ 1,22213Adonikam asefo dodow yɛ 66614Bigwai asefo dodow yɛ 2,05615Adin asefo dodow yɛ 45416Ater asefo (Hesekia asefo) dodow yɛ 9817Besai asefo dodow yɛ 32318Yora asefo dodow yɛ 11219Hasum asefo dodow yɛ 22320Gibar asefo dodow yɛ 9521Betlehemfo dodow yɛ 12322Netofafo dodow yɛ 5623Anatotfo dodow yɛ 12824Asmawetfo dodow yɛ 4225Kiriat-Yearimfo, Kefirafo ne Beerotfo dodow yɛ 74326Ramafo ne Gebafo dodow yɛ 62127Mikmasfo dodow yɛ 12228Bet-Elfo ne Aifo dodow yɛ 22329Nebo ɔmanmma dodow yɛ 5230Magbis ɔman dodow yɛ 15631Elam ɔmanmma dodow yɛ 1,25432Harim ɔmanmma dodow yɛ 32033Lod, Hadid ne Ono manmma dodow yɛ 72534Yeriko ɔmanmma dodow yɛ 34535Senaa ɔmanmma dodow yɛ 3,630
36Eyinom ne asɔfo dodow a wofi nnommum mu bae:
Yedaia asefo (a wɔnam Yesua fi so) dodow yɛ 97337Imer asefo dodow yɛ 1,05238Pashur asefo dodow yɛ 1,24739Harim asefo dodow yɛ 1,017
40Eyinom ne Lewifo a wofi nnommum mu bae:
Yesua ne Kadmiel asefo (Hodawia asefo) dodow yɛ 74
Asaf2.41 Na Asaf yɛ Lewifo no mu baako a Dawid yii no ma ɔhwɛɛ nnwomkyerɛ so. asefo mu nnwontofo dodow yɛ 128
42Aponanohwɛfo:2.42 Na aponanohwɛfo no yɛ Lewifo a wɔwɛn Asɔredan no kwan ano.
Salum, Ater, Talmon asefoAkub, Hatita ne Sobai asefo 139
43Saa asɔredan mu asomfo asefo yi na wofi nnommum mu bae:
Siha, Hasufa, Tabaot,44Keros, Siaha, Padon,45Lebana, Hagaba, Akub,46Hagab, Samlai, Hanan,47Gidel, Gahar, Reaia,48Resin, Nekoda, Gasam,49Usa, Paseah, Besai,50Asna, Meunim, Nefisi,51Bakbuk, Hakufa, Harhur,52Baslut, Mehida, Harsa,53Barkos, Sisera, Tema,54Nesia ne Hatifa.
55Ɔhene Salomo asomfo asefo yi nso fi nnommum mu bae:
Sotai, Hasoferet, Peruda,56Yaala, Darkon, Gidel,57Sefatia, Hatil,Pokeret-Hasebaim ne Ami.58Na asɔredan mu asomfo ne Salomo asomfo asefo no dodow yɛ 362
59Saa bere no, kuw foforo a wofi Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adan ne Imer nkurow so san baa Yerusalem. Nanso wɔantumi ankyerɛ mu sɛ, wɔn anaa wɔn abusuafo yɛ Israel asefo.
Saa nnipakuw yi ne:
60Delaia, Tobia ne Nekoda mmusua a wɔn dodow yɛ 652
61Asɔfo mmusua abiɛsa:
Habaia, Hakos ne Barsilai no nso san baa Yerusalem. (Saa Barsilai yi, na waware Barsilai a ofi Gilead no mmabea no mu baako a enti na wafa nʼabusua din.)
62Nanso, na wɔayera wɔn anato nhoma no nti wɔmma wɔn ho kwan ansom sɛ asɔfo. 63Na amrado no mma kwan mma wonnni afɔrebɔ nnuan mu kyɛfa mpo, gye sɛ ɔsɔfo bi wɔ hɔ a ɔnam ntontobɔ kronkron so bisa Awurade.
64Enti nnipa a wɔsan baa Yuda no nyinaa dodow yɛ mpem aduanan abien, ahaasa ne aduosia (42,360), 65a asomfo mpem ason ahaasa aduasa ason (7,337) nka ho, ne nnwontofo2.65 Lewifo nnwontofo no akyi no na nnwontofo foforo bi wɔ hɔ a wɔto nnwom wɔ afahyɛ, aware ne ayi ase. ahannu (200) a wɔyɛ mmarima ne mmea. 66Wɔde apɔnkɔ ahanson aduasa asia (736), mfurum ahannu aduanan anum (245), 67yoma ahannan aduasa anum (435) ne mfurumpɔnkɔ mpem asia ne ahanson aduonu (6,720) kaa wɔn ho kɔe.
68Bere a woduu Awurade asɔredan no ho wɔ Yerusalem no, abusua ntuanofo no bi fii koma pa mu yii ntoboa a wɔde besiesie Awurade asɔredan no wɔ ne sibea dedaw mu hɔ. 69Na ntuanoni biara maa nea obetumi. Akyɛde a wɔde mae no nyinaa ano sii sikakɔkɔɔ sika nnwetɛbona mpem aduosia baako (61,000), dwetɛ nkaribo pɔn mpem ahansia ahannu aduonum (600,250) na asɔfotade ɔha (100) a wɔde bɛma asɔfo.
70Enti asɔfo, Lewifo, nnwontofo, aponanohwɛfo, asɔredan mu asomfo ne ɔmanmma no bi tenaa nkuraa a ɛbɛn Yerusalem no. Nkae no san kɔɔ Yuda nkurow afoforo bi a wofi hɔ bae no so.
AKCB : Ɛsra 2